XOG XASAASI: Maxaa ka jira in Villa Soomaaliya diyaarineyso ciidan lagu burburinayo Jubbaland? | HalQaran.com
Madaxweyne Ku-xigeenka 1aad ee Maamulka Jubbaland, Maxamuud Sayid Aadan
Kismaayo (Halqaran.com) – Jubbaland ayaa waxay shaaca ka qaaday inay Dowladda Somaliya diyaarinayso ciidan ay ugu talagashay in iyada lagu burburiyo, iyadoona tallaabadaasi ku sheegtay mid nasiib-darro ah.
Madaxweyne Ku-xigeenka 1aad ee Maamulka Jubbaland, Maxamuud Sayid Aadan oo shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Kismaayo, ka dib markii kulankaasi la soo geba-gabeeyay ayaa ka hadlay wararka ku aadan ciidamada la sheegay in dowladdu u adeegsanayso burburinta Jubbaland.
Madaxweyne Ku-xigeenka Jubbaland ayaa wuxuu bidhaamiyay in Ciidamada Militariga Itoobiya iyo Nabad Suggida Somaliya ay Gobolka Gedo ka wadaan arrin ka baxsan sharciga, sida uu yiri.
Madaxweyne Ku-xigeenka Jubbaland ayaa wax nasiib-darro ah ku sheegay in Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) uu burburinta Jubbaland u adeegsado Ciidamo Itoobiyaan ah.
Villa Soomaaliya oo diyaarineyso ciidan lagu burburinayo Jubbaland